Sizifikelele Njani iZimvo eziyi-100,000 zenyanga? Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 25, 2011 NgoLwesine, Aprili 27, 2017 Douglas Karr
Abanye abantu bacinga ukuba ukuhlaselwa kweeblogi kunye neendawo zosasazo zasekuhlaleni zenza ukuba kubenzima ngakumbi ukuba ilizwi lakho livakale. Ngelixa kuyinyani ukuba ingxolo ingaphezulu kakhulu, ithuba lokufumana ilizwi lakho okanye ilizwi lenkampani eliviweyo kwimidiya yoluntu alinakwenzeka kuphela, kulungile ukuba unesiqulatho abantu abasifunayo.
Sigqithile nje Izimvo eziyi-100,000 ngoNovemba kwiMartech, irekhodi yexesha lonke kunye nokusishukumisela kudidi oluphezulu lweeblogi zentengiso ezifumana ngaphezulu kwesigidi esinye seendwendwe ngonyaka. (Qaphela: itshathi engezantsi ayilandeleli lonke ixesha… kuphela ukuqala kwethu ukusebenzisa iZibalo zeWordPress)
Ke siyenze njani? Ndixelele abantu lonke ikhondo lomsebenzi wam (nangaphambi kokuba ungene kwi-intanethi) ukuba eyona nto iphambili kwintengiso enkulu kukusebenzisa iindlela ezininzi ukukhuthaza imveliso okanye inkonzo yakho. Awungekhe upompoze yonke imali yakho kwinto enye… awuthinteli kuphela abaphulaphuli, kodwa umisela umda ngokuqatha kwindlela esivakala ngayo ilizwi lakho. Kwiminyaka emi-5, uMartech wayeyibhlog esekwe kwisicatshulwa. Andinabo oovimba okanye ixesha lokusebenzisa amanye amajelo, ndiye ndasebenza nje ukuze ndisebenzise olo hlobo.
Kulo nyaka; nangona kunjalo, kwahluke kakhulu. Nanga onke amanyathelo ahlukeneyo esisebenze kuwo:
Kunyaka ophelileyo siye sarekhoda Umboniso weveki nganye (ucimile namhlanje ngenxa yeholide yase-US). Sibe neveki neveki sithetha ngeyona ntengiso iphambili kushishino kwaye umboniso ukhulile-kunye namawaka wabaphulaphuli inyanga nenyanga.
Sidibanise i email marketing Inkqubo eqhubekile nokuqhuba iindwendwe zabuyela kwibhlog. Oku okwangoku kuyasetyenzwa kwakhona njengoko sifudukela kumxhasi wethu omtsha, iDelivra, kodwa ibe licebo elihle ngokumangalisayo. Ukuba ibhlog yakho ayinayo inkqubo ye-imeyile, yiqale namhlanje! Sisebenza kwezinye izixhobo zabasebenzisi beWordPress kuloo ndawo… qhubeka ujonga kuthi!
Umphuhlisi wethu, uStephen, usebenze kwiiplagi ezininzi- kubandakanya i Iwijethi esecaleni yewindows, Ukufumana ingqwalaselo enkulu kuluntu lweWordPress.
Kunye nokubhukisha inkqubo yethu kanomathotholo, UJenn ibingayekeleli ukubandakanya iinethiwekhi zethu kwi-Twitter, kuFacebook nakwi-LinkedIn kwaye ukugcwala kwabantu ekuhlaleni kuye kwaqhuma, rhoqo ukogqitha ukugcwala kwethu kokhangelo inyanga nganye! Ngoku sisebenzisa Bomgcini ukunceda ukulawula nokugcina ezo ncoko kwi-intanethi.
Iibhukumaka zentlalo kunye neendawo zokufumanisa ezinje ngeStumbleUpon zisithumele itoni yezithuthi, ke ukubandakanya amaqhosha okwabelana ngokwasentlalweni kwisithuba ngasinye ukwenza ukuba kube lula kubantu ukuba babelane ngomxholo wethu neenethiwekhi zabo ibe licebo elihle ukuqhuba ukugcwala kwabantu kuthi.
Sikwazisa ngenkuthalo indawo leyo, nayo uhlahlo-lwabiwo mali oluncinci kwi-Facebook nakwi-LinkedIn kubaphulaphuli abathile. Andiqinisekanga ukuba kuninzi okubuyiswayo kutyalo-mali apho, kodwa kukuzibandakanya okuhle kophawu ukugcina iMartech ingaphezulu kwengqondo kunye nabaphulaphuli ekujoliswe kubo bee-CMOs kunye nabalawuli beNtengiso.
Siye safaka iipoll ngokusebenzayo ukubandakanya abafundi bethu. Zoomerang ube ngumxhasi oncomekayo kwaye usincede kakhulu ekuthabatheni umdla wabakhenkethi kunye nezimvo, ukusinika izimvo zomxholo ezongezelelweyo veki nganye. Iakhawunti esisiseko yeZoomerang isimahla, ke ndingakhuthaza nabani na ukuba ayisebenzise! Elinye igama lesilumkiso kukuba unokungafumani mpendulo inzima kwivoti yakho. Ngelixa abantu bekuthanda ukufunda iibhlog, abasoloko bethatha inxaxheba.
Siphuhlile Amanani entengiso kuzo zombini iDelivera (I-imeyile yeHolide ngeZona ndlela ziBalaseleyo) kunye neZoomerang (Abasebenzisi kunye neSMB Iziphumo zoPhononongo lweendaba kwiNtlalo) kwaye wabakhulula baqhubeka Martech Zone njengenxalenye yeepakeji zethu zenkxaso-mali kunye neenkampani. I-infographics iyinto emnandi ngokufikelela kubaphulaphuli ukuba uyakwazi oluxhathisayo Bona!
Sihambise ibhlog yethu kwinto yobugcisa Nkampani ye-WordPress, I-WPEngine idityaniswe ne Inethiwekhi yokuThumela Inikwe amandla yiStackPath CDN, i-CDN ekhawuleza kakhulu kuneAmazon.
Okokugqibela kunye nefuthe elikhulu: yoqobo, umxholo obalulekileyo! Ngelixa intengiso kunye neetekhnoloji zeebhlog zifuna ukulwa ngebali elitsha - okanye okubi kakhulu - ukubuyela kwakhona ke, sisebenza ngokungaguquguqukiyo ukuqinisekisa ukuba uyayifumana ulwazi oluxabisekileyo, oluchanekileyo, olusebenzayo kwishishini.
Yintoni elandelayo? yethu Nkonzo Uqalisa ezinye iikharityhulam zemfundo kunye neeYunivesithi kunye neenkampani eziphambili. Siza kusebenza ezi zifundo kwiiWebinars kunye nezifundo zoqeqesho zabafundi bethu. Oku kuyasivumela ukuba siye ngaphaya kwencoko kwaye sombele kwaye sifumane iziphumo ezilungileyo. Jonga ezinye iividiyo ezongezelelweyo, ii-webinars kunye neencwadi eziza ngendlela yakho!
Izolo ibingumbulelo apha eMelika kwaye ndiyayixabisa yonke inkxaso osinike yona! Enkosi!
tags: 100000imibono yebhlogukujonga iphephaimbono
Ngo-2011 uMvulo we-infographic
Nov 27, 2011 kwi-6: 30 AM
Wowu! Uyamangalisa! Ndinqwenela njani ukuba ndiza kufumana ubuncinci isiqingatha seendwendwe zakho. Ndiza kuzama ezinye zeengcebiso kunye neengcebiso zakho.